March | 2014 | Pyay City
ထူးကြီး မူးကြီးဆွေးနွေးခန်း ( လူမည်းကြီးတဲ.လား )
မြို့နယ်ရဲမှူးက ပြည်မြို့နေ ပြည်သူများ ကောလဟာလကို မယုံပါရန်နှင့် အေးချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်ရန် အမြန်ဆုံး စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရန် ကြိုးစားနေကြောင်း ပြောကြား
စိုက်ခင်းများ ဖျက်ဆီးနေသည့် တောဆင်ရိုင်း တစ်ကောင်ကို နေရာ ပြောင်းရွှေ့မည်
ကျောင်းဆရာမကို ရဲတပ်သားက ဓားဖြင့်ထိုးပြီး ဆိုင်ကယ်လုယက်
ဥပဒေပေါင်း (၂၁၀) ပြင်ဆင်ရန်အတွက် ပြည်မြို့တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ပြည်မြို့နယ် ဂီတ အစည်းအရုံးမှ ကြီးမှူး၍ (၆၇) ကြိမ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိန်းအမှတ် ဂုဏ်ပြု သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည်
မျိုးဆက်သစ် ခရီးသည်တင် မှန်လုံယာဉ်မှ ကားတစ်စီးကို ကျော်တက်စဉ် ထော်လာဂျီအား ၀င်ရောက် တိုက်မိသဖြင့် ထော်လာဂျီပေါ်တွင် ပါလာသော ခရီးသည် (၄) ဦးသေဆုံးပြီး (၁၀) ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
ပြည်မြို့၊ န၀ဒေးသကြားစက်မှ စက်ရုံ ကတ္တားအလေးချိန် မှားယွင်း ချိန်ခဲ့သည့် အတွက် စက်ရုံတာဝန်ရှိသူမှ တောင်သူများနှင့် ကားသမားများအား တောင်းပန်
အေအာရ်တီဆေးကို ပြည်ခရိုင်အတွင်းရှိ ဆေးရုံများတွင် ထုတ်ယူနိုင်ရန်စီစဉ်
လက်ပံတောင်း သပိတ်ဖြိုခွဲခံရမှု ၂ နှစ်ပြည့် ပြည်မြို့တွင် ဒေသခံနှစ်ဦး ဆန္ဒပြ
မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် နာရေးတွင် မီးသတ်ကား သုံးစွဲခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အချင်းများအမှုဖြစ်
ဧရာဝတီမြစ် အတွင်း ပုပ်ပွနေသည့် အမျိုးသားတစ်ဦး အလောင်းတွေ့
“ပညာရေးစနစ်”ကို ဆန့်ကျင်သည့် စာတန်းများ ပြည်တက္ကသိုလ် နံရံမှာရေးဆွဲထား
ပြည်မြို့ထွက် မုန်လာဥများ ဈေးကောင်း ရသော်လည်း အထွက်နှုန်း နည်းသဖြင့် တောင်သူများ တွက်ချေမကိုက်
မြန်မာစာ ပထမနှစ် အဝေးသင်ကျောင်းသား ပျောက်ဆုံးနေ သဖြင့် ပြည်မြို့မ ရဲစခန်းသို့ မိသားစုမှ လူပျောက် တိုင်တန်း
သပိတ်စခန်း ဖွင့်ထားသည့် အထည်ချုပ်စက်ရုံ အလုပ်သမား ၆၈ ဦးကို ကုမ္ပဏီ နစ်နာကြေးပေးမည်
Published 22/03/2014 | By Pyay City
ပြည်၊ မတ် ၂၁ The Voice
ပြည်မြို့ ဂန္ဓာမာ စက်မှုကွက်သစ်ရှိ သီတာ-မြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အထည်ချုပ် စက်ရုံရှေ့တွင် သပိတ်စခန်း ဖွင့်ထားသည့် အလုပ်သမား ၆၈ ဦးကို နစ်နာကြေး နှစ်လစာနှင့် ကရုဏာကြေး တစ်လစာတို့ကို မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီက ပေးအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း မြို့နယ် ဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့ထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
အုတ်ဖိုမြို့နယ်တွင် အရေးပေါ်လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ချထား
မတ်လ ၂၅ ရက်နှင့် ၂၆ ရက်များတွင် အဓိကရိုဏ်းများ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်ဟူသော ကောလာဟလသတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည့် ပဲခူးတိုင်း၊ အုတ်ဖိုမြို့နယ် အိုးသည်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် လုံ ခြုံရေးများ တိုးမြှင့်ချထားသည်ဟု မျက်မြင်တွေ့ကြုံသူ ဒေသခံမြို့မိမြို့ဖ ဦးခင်ထွန်းက မဇ်္ဈိမကို မတ်၂၀ ရက် တွင် ပြောသည်။
ပြည်မြို့ သီတာမြန်မာ အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် အလုပ်သမားများ ဆန္ဒပြ
စက်ရုံမှ အသစ်ပြဌါန်းလိုက်သည့် စည်းကမ်းချက်များကို သဘောတူ လက်မှတ်ထိုးစာချုပ်ခိုင်းသဖြင် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများအကြား သဘောထား ကွဲလွဲမှုများဖြစ်ပွားကာ ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့ စက်မှုကွက်သစ်ရှိ သီတာမြန်မာ အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် မတ်လ (၁၇) ရက်နေ့က အလုပ်သမား ခြောက်ဆယ် ကျော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
စေတီတည်ထားမည့် နေရာသည် ကျွဲစားကျက်မြေဖြစ်သည်ဟု ဆိုကာ တားမြစ်မှုများရှိ
အလှူရှင်တစ်ဦးမှ ၀ယ်ယူလှူဒါန်းသော မြေနေရာသည် ကျွဲစားကျက်မြေဖြစ်သည်ဟုဆိုကာ ပဲခူးတိုင်း ပြည်ခရိုင်ပြည်မြို့တွင် စေတီတည်ထားမည့်နေရာအား မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ စာထုတ်တားမြစ်ခြင်း ရပ်ကျေး သံင်္ဃာ့နာယက အတွင်းရေးမှူး ဆရာတော်မှ ခေါ်ယူတားမြစ်ခြင်းများ ဖြစ်နေကြောင်း သိရပါသည်။
ပြည်မြို့ မြရွှာ သကြားစက် စက်ရုံပိုင် မြေကော်စက်ယာဉ် မီးလောင်မှု စက်ရုံမှူးက အမှူမဖွင့်လိုသဖြင့် အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိ
ပြည်မြို့နယ်၊အမှတ်(၁) နယ်မြေရဲစခန်းအပိုင် ကုန်းသာလင်းအုပ်စု၊မြရွှာ ရှိ နဝဒေးသကြားစက်၏ အနောက်ဘက်ရှိ ရေမြောင်းအား စက်ရုံဝန်ထမ်းယာဉ် မောင်း မင်းမင်းထွန်း (ဘ) ဦးသန်းရွှေ ရှမ်းကုန်းရွာနေသူမှ စက်ရုံပိုင် မြေကော် စက်(back hole) ယာဉ်ဖြင့် မြေတူးဖေါ်စဉ် ဘက်ထ္ထရီရှော့ဖြစ်ရာ အင်ဂျင်ပိုင်းရှိ ဆီတိုင်ကီအား မီးလောင်မှု မတ်လ (၁၁) ရက်နေ့ ညနေ(၄းဝဝ) ခန့်ကဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Your IP Address: 173.245.52.102
Android မှ ဖတ်ရှုရန်
Copyright © 2014 http://www.pyaycity.com. All Rights Reserved.
Powered By Webmaster Myanmar